Tsiroanomandidy-Fenoarivobe: amboarina ny ampahan-dalana 32 km - ewa.mg
Tsiroanomandidy-Fenoarivobe: amboarina ny ampahan-dalana 32 km
News - Tsiroanomandidy-Fenoarivobe: amboarina ny ampahan-dalana 32 km
Toy ny any amin’ny faritra hafa
novatsin’ny fitondrana foibe fitaovana, nahazo ny azy koa ny any
amin’ny faritra Bongolava, ho an’ny fanamboaran-dalana. Hisantarana
ny asa ny fanamboarana ampahan-dalana 32 km mampitohy an’i
Tsiroanomandidy sy Fenoarivobe. Laharam-pahamehana ao anatin’ny
faritra io lalana io, manamora ny fivezivezen’ny olona sy ny
vokatra eo amin’ny distrika roa tonta. Manamora ihany koa ny
fampidirana herinaratra sy ny fitandroana ny
Ezaka goavana izao
fanamboaran-dalana izao ao amin’ny kaominina Fenoarivobe,
hahafahana mifandray amin’ireo kaominina manodidina, hahazoana
mampandroso amin’ny lafiny rehetra ny faritra Bongolava, indrindra
ny toekarena. Tsy misy tsy mahalala fa anisan’ny iankinan’ny
fampandrosoana ny faritra ny fahavitan’ny lalana hahazoana mamoaka
vokatra, ny fambolena sy ny fiompiana. Mitombo ny fidiram-bola, ary
miakatra ny fari-piainan’ireo tantsaha, raha eo amin’ny sehatry ny
fambolena sy ny fiompiana fotsiny no asian-teny.
L’article Tsiroanomandidy-Fenoarivobe: amboarina ny ampahan-dalana 32 km a été récupéré chez Newsmada.
Barea de Madagascar: «Tsy ampy lalao i Caloin sy i Bapasy», hoy i Nicolas Dupuis
Naneho ny heviny tamin’ny mpanao gazety, i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar, taorian’ny lalao nifanandrinana tamin’ny Etalons-n’i Borkina Faso iny, ny alatsinainy alina ihany. Novaliany mahitsy ny fanontaniana ny amin’ny tsy nampidirany an’i Dimitri Caloin sy Razakanantenaina Pascal (Bapasy), tamin’iny fihaonana iny. “Tsy ampy lalao izy mirahalahy ireo, tany amin’ny klioba nilalaovany nialoha ny niatrehany ny fampivondronana ka izay ny tsy nampijoroana azy ireo”, hoy izy. Nomarihiny tsara kosa fa tena zava-dehibe ho an’ny ekipa ny fisian’izy mirahalahy ao anaty Barea de Madagascar. Nohamafisiny fa nisy fiantraikany be teo amin’ny lalaon’ny Barea, ny tsy naha teo ireo mpilalao tompon-toerana efatra mirahalahy dia i Metanire, Mombris, Amada ary i Carolus. Na izany aza, notolorany fisaorana ireo mpilalao tonga, indrindra fa ireo vaovao. Niaiky izy fa tsara rafitra ny Etalons-n’i Borkina Faso, nanoloana ny Barea de Madagascar.Tsy noresahiny kosa ny ho fihaonana amin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, eo amin’ny fifanintsanana ho an’ny Can 2022. Lalao hotanterahina any Abidjan, ny 9 novambra ho avy izao sy fihaonana miverina hatao any Toamasina ny 17 novambra 2020. Marihina fa efa samy niverina namonjy ny ekipany avy ireo mpilalaon’ny Barea rehetra taorian’iny lalao tany Maraoka iny. TompondakaL’article Barea de Madagascar: «Tsy ampy lalao i Caloin sy i Bapasy», hoy i Nicolas Dupuis a été récupéré chez Newsmada.
Vary zafindraony: nahazoana vokatra 9,17 t/ha
Nampitain’ny Sinoa ho an’ny Malagasy ny fampiasana ny masomboly vary zafindraony. Nahomby ny vokatra, nahazoana 9,17 t/ha.Nanomboka ny oktobra 2019 ny Fandaharanasa mikasika ny fambolena, ny fiompiana, ny jono (PSAEP) sy ny Lasitra fandaharanasa isaky ny firenena (CPP), ao anatin’ny Fiaraha-miasan’ny firenena samy tatsimo (CSS) an’ny FAO, ka iarahan’i Madagasikara sy i Sina. Tafiditra ao anatin’izany ny famokarana vary zafindraony (hybride), mety tsara amin’ny toe-tany eto amintsika. Nitsidika ny fahavokaran’ity karazam-bary ity ny minisitry ny Fambolena (Maep), Ranarivelo Lucien, ny 14 mey teo, tany Mahitsy. Faritra telo (Analamanga, Alaotra Mangoro, Diana) no nanatanterahana ny tetikasa, ampiasana ny vary zafindraony. Ho an’Analamanga, nahafa-po ny vokatra nandritra ny taom-pambolena indroa nisesy (2019-2020 sy 2020-2021) tany amin’ny toerana 11 nanaovana ny santatra sy andrana . Satria nahazoana 157,7 t ny vokatra tamina velaran-tany 17,2 ha, manome vary 9,17 t/ha.Tantsaha 5.200Miisa valo ny teknisianina sinoa niara-niasa akaiky tamin’ny Malagasy miisa valo ihany koa. Tanjona ny hanofanana malagasy mpamokatra maherin’ny 1.000, niampy teknisianina miisa 100. Mahatratra 5.200 ny tantsaha efa nahazo fiofanana mampiasa masomboly zafindraony. Tany amin’ny kaominina Mahitsy, nahavita nividy masomboly vary zafindraony, mitentina 2,6 tapitrisa Ar ny kaoperativa iray, ho an’ny taom-pambolena 2020-2021. Njaka AndriantefiarinesyL’article Vary zafindraony: nahazoana vokatra 9,17 t/ha a été récupéré chez Newsmada.
Covid-19: Azo antoka ary manaraka ny fenitra ny valim-pitiliana avy amin’ny « GENEXPERT »
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Covid-19: Azo antoka ary manaraka ny fenitra ny valim-pitiliana avy amin’ny « GENEXPERT » » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy. GENEXPERT: AZO ANTOKA ARY MANARAKA NY FENITRA IRAISAM-PIRENENA NY VALIM-PITILIANAFanazavana iarahana amin' i Pr SOLOFOMALALA Gaëtan Duval, Sekretera Jeneralin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka.Malagasy mifanohana, mandresy ny "coronavirus".#Zarazarao Publiée par Ministère de la Santé Publique Madagascar sur Mercredi 22 juillet 2020 L’article Covid-19: Azo antoka ary manaraka ny fenitra ny valim-pitiliana avy amin’ny « GENEXPERT » a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Tafapetraka ny vondron’ny vehivavy mpandraharaha
Tafapetraka tamin’ny fomba ofisialy, ny talata lasa teo, ny vondron’ny vehivavy mpandraharaha eo anivon’ny Antenimieran’ny varotra sy indostria ao Toamasina, Notontosaina tao amin’ny efitranon’ny CCIT Ampasimazava ny lanonana. « Manana adidy amin’ny fiarovana ny tombontsoan’ny mpandraharaha malagasy ny Antenimieran’ny varotra manoloana ny famerenana entana sy vokatra avy eto Madagasikara ataon’ireo firenenaany ivelany. Tokony hofantarina ny kalitao ilain’ny mpanafatra sy ny firenena hanondranana ary ny mombamomba ny mpanafatra », hoy ny sekretera jeneralin’ny faritra Atsinanana, i Bemahefa Gervais, nandritra ny kabariny. Tsy vitsy, hoy izy, ny mpandraharaha malagasy no misedra olana aorian’ny fanondranany ny vokatra. Manjavona ilay mpanafatra entana avy aty amintsika. Nambaran’ny filoha nasionalin’ny vondron’ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara, i Dewa Ramjee Viviane, fa misy tosika sy fiaraha-miasa avy amin’ny Sadc ny mpandraharaha avy eto Madagasikara ka hampirisihina ny mpandraharaha sy fikambanam-behivavy mpanao asan-tanana mpamboly hisehatra amin’ny avoavo kokoa sy handrayanjara amin’ny fampiofanana hidirana amin’ny fanatsarana ny kalitaon’ny vokatra. Voalazany fa hianarana ny fomba fikirakirana sy fifandraisana amin’ny firenena rehetra mivondrona ao anatin’ny Sadc.SajoL’article Tafapetraka ny vondron’ny vehivavy mpandraharaha a été récupéré chez Newsmada.
Eo amin’ny tontolon’ny « arts visuels », anisan’ny misongadina, tsy eto an-toerana ihany fa hatrany amin’ny sehatra iraisam-pirenena, i Idah Razafindrakoto. Tanora, teratany malagasy mikirakira sy mandalina momba ny tantara an-tsary. Tafiditra ao anatin’ny mpakanto « carnéttiste » rahateo ihany koa i Ida (anarana amin’ny maha mpanakanto azy). Manatanteraka fampirantiana any Abidjan izy amin’izao volana avrily izao. Ranty nampitondraina ny lohateny « Imaginarium à Abidjan». Mifantoka kokoa any amin’ny lohahevitra fanentanana ny amin’ny tokony hikajiana ny tontolo iainana ity hetsika ity. Saika tazana ao avokoa ireo haikanto voasokajy ao anatin’ny « arts visuels ». Anisan’izany ny sary, ny tantara an-tsary, sns. Izao tontolo izao mihitsy no tairin’I Ida mba hanao ezaka hitaiza sy hanabe ny ankizy sy ny tanora hanasoa ny tontolo iainana mba hitondra fampandrosoana maharitra.Marihina fa fa firenena maro ny hanehoany izao talenta sy hafatra tiany hampitaina izao. Anisan’ireny i Madagasikara, i Ghana, i Malaisie…Nanangona : HaRy Razafindrakoto L’article « Arts visuels » – « Imaginarium à Abidjan»: mampiranty any Cote d’Ivoire i Idah Razafindrakoto a été récupéré chez Newsmada.
Namoa-doza indray ny delestazy… Zazakely nasiana “oxygène” namoy ny ainy tao amin’ny hopitaly
Noho ny fahatapahan-jiro tao amin’ny hopitalin’i Vatomandry, ny asabotsy teo, namoy ny ainy ny zazakely iray vokatry ny fijanonan’ny milina mampandeha ny “oxygène” namelomana azy. Nilaza ny tsy hipetra-potsiny, noho izany, ny ray aman-dreniny fa hametraka fitoriana.Araka ny fanazavan’i Marolahy Alexis, rain’ilay zazakely, narary nandoa ity zanany ity, ny zoma teo ka nentina tao amin’ny hopitaly ka nahazo fitsaboana sahaza azy. Tsapa fa nisy fiovana ary nentina nody niverina tany an-trano ihany, raha ny fanazavany hatrany. Tsy araka ny nieritreretan’ireo ray aman-dreniny anefa ny zava-niseho fa niverina indray ny aretina tokony ho tamin’ny 7 ora alina tamin’io fotoana io ihany ka niverina indray tany amin’ny hopitaly. Notazonin’ireo mpitsabo ilay zazakely mba hahafahana manara-maso akaiky ny fahasalamany. Nilaza rahateo ny mpitsabo fa reraka ilay zaza. Nandray fanapahan-kevitra avy hatrany ny mpitsabo ka nasiana “oxygène” izy, taorian’izay dia nahita torimaso. “Taitra izy tokony ho tamin’ny 4 ora maraina ary efa milalao tanana sy nihiratra”, hoy hatrany ilay raim-pianakaviana. Tamin’ny 6 ora sy 15 mn maraina, ny asabotsy, tapaka tampoka ny herinaratra tao amin’ny hopitaly.Hametraka fitoriana ny rain’ilay zazakely…Niantso ny tomponandraikitra ka nandefa hafatra tamin’ny finday mangataka amin’ny hamerenana haingana ny herinaratra ao amin’ny hopitaly ity raim-pianakaviana ity satria marary ao amin’ny hopitaly ny zanany ary nametahana oxygène. “Miangavy mba avereno haingana azafady”, hoy ny hafatra sms nalefan’ilay raim-piakaviana tamin’ny finday. “20 mn anefa vao niverina ny jiro kanefa 10 mn taorian’izay dia tapitra ny ain-janako”, hoy izy. Nohamafisiny fa nandalo tao amin’ny foiben’ny Jirama ao Vatomandry izy mba hangataka fanazavana ny antony nahatonga ny fahatapahan’ny herinaratra tsy nisy fampilazana kanefa 100 metatra ny elanelan’ny hopitaly sy ny Jirama, saingy namaly ny “chef de groupement” fa hoe nisy tariby nifampikasoka nitselatselatra ka novonoina haingana ny réseau mankany amin’ny hopitaly. “Tsy nahitako soritra misy tariby may akory anefa nandritra ny fijereko ireo taribin-jiro ka hitondra ity raharaha ity eny anivon’ny fitsarana ny tenako”, hoy hatrany izy.Sajo/J.CL’article Namoa-doza indray ny delestazy… Zazakely nasiana “oxygène” namoy ny ainy tao amin’ny hopitaly a été récupéré chez Newsmada.
Maninday Toliara: kilan’ny afo ny tranon’ny mpianatra
Nitrangana haintrano teny amin’ny faritra fonenan’ny mpianatra ao amin’ny Oniversiten’i Maninday Toliara, omaly. Tranona mpianatra miisa roa no may ka tsy nisy noraisina intsony ny entana rehetra tao an-trano. Niainga avy ao amin’ny trano iray ny afo ka niampita tamin’ny trano iray teo anilany. Araka ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana, vokatry ny tsy fahatomombanan’ny herinaratra no nitarika fipoahana mafibe ka nampirehitra ny trano. Niezaka nifanome tanana tamin’ny famonoana ny afo ireo mpianatra mifanila vodirindrina, saingy tsy nahatohitra ny fijoalajoalan’ny afo noho ny halaviran’ny rano. Fantatra fa mpianatra efa mamarana ny fianarana ireto traboina tampoka ireto. Levon’ny afo ny tahirin-kevitra rehetra hanomanana ny fahazoana ny mari-pahaizana Master. Marihina fa trano ivelan’ny Bloc 43 ireto tranon’ny mpianatra may ireto.CMSL’article Maninday Toliara: kilan’ny afo ny tranon’ny mpianatra a été récupéré chez Newsmada.
Sendikan’ny indostria: hametraka hevitra ho fanarenana any amin’ny ny governemanta
Nanao ny fivoriambe, omaly tao amin’ny Carlton Anosy, ireo mpikambana ao amin’ny Filankevitra fitantanana ny Sim ( Sendikan’ny indostria eto Madagasikara), nisafidianana izay mpikambana vaovao ao amin’ny Filankevi-pitantanana. Voafidy fanindroany ho filoha i Hassim Amiraly. Tapitra tamin’ny avrily 2021 ny fe-potoana fiasana voalohany, 2019-2021, saingy noho ny hamehana ara-pahasalamana izao vao vita ny fifidianana ny biraon’ny Filankevitra vaovao.“Ny azoko ambara aloha, niezaka nanao faran’izay heriny ny mpandraharaha tsy hampikatso ny toekarena malagasy noho ireny krizy ireny. Tonga amin’ny fotoana fanarenana izao, ka tsy ny filoha irery no manapaka fa mbola hivory izaha y mpikambana vaovao ao amin’ny birao, hamaritra ny laminasa vaovao ho an’ny roa taona manaraka”, hoy ny filohan’ny Sim, i Hassim Amiraly.25 ireo mpikambana vaovao ao amin’ny Filankevi-pitantanana hametraka ny fehinkeviny any amin’ny governemanta momba ny fanaranenana. Tsy tokony hanapa-kevitra irery izany ny fitondram-panjakana fa hihaino ny feon’ireo mpandraharaha. Mifampiankina daholo ny rehetra, ny fanjakana sy ny tsy miankina, ny ataon’ny mpampiasa sy ny mpiasa hatramin’ny fifandraisana any ivelany.Ho an’ny tsena anatinyTsena anatiny no ifantohan’ny Sim, tsy mitsahatra mampiroborobo ny “vita malagasy”, ho fanampiana ireo mpikambana sy ho an’ny mpanjifa malagasy. Nanao ny ezaka rehetra ny mpandraharaha mpitantana indostria, na tao anatin’ny krizy aza, Amin’ny ankapobeny, nijery ny mpiasa ny mpampiasa, tsy nisy ny olana, toy ny fanesorana mpiasa, tsy nisy ny fampitsaharana ara-teknika, na fampihenana karama.14 ireo voafidy nomena famantarana “vita malagasy”. “Masontsivana nisafidianana azy ireo, dia tsy maintsy mpikambana ao amin’ny Sim, manodina akora avy eto Madagasikara sy ny vokatra azo avy aminy. Jerena ny vidiny amin’izao fisondrotan’ny vidin’ny akora eto an-toerana sy maneran-tany izao”, hoy Ravoavahy Clara sy Rasamimanantsoa Rina, samy filoha lefitra ao amin’ny Filankevi-pitantanana.R.MathieuL’article Sendikan’ny indostria: hametraka hevitra ho fanarenana any amin’ny ny governemanta a été récupéré chez Newsmada.
Famahana olana amin’ny vidim-piainana: ho avy ny sambo miisa 20 hitondra PPN mora
Tsy ho ela. Nambaran’ny filoha Rajoelina Andry, teo am-pahatongavana teny Ivato, omaly, fa ho avy ny sambo miisa 20 hitondra ireo entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro (PPN), toy ny siramamy sy ny vary… “Hamidy mora izany entana izany… Sambany eo amin’ny tantaran’ny firenena ny tahaka izany”, hoy izy. Nanteriny fa mitady vahaolana ny fanjakana na eo aza ny fiakaran’ny vidin’ny PPN eny amin’ny tsena iraisam-pirenena.Ankoatra izany, notsiahiviny ny momba ilay zotram-pitaterana an-tariby “Téléphérique”, hampitohy toerana maromaro eto an-dRenivohitra.Herinaratra mandeha avy amin’ny masoandroNambarany fa hitondra fanovana goavana ity tetikasa novatsin’ny Frantsay vola ity. “Miisa 40 000 isan’andro ireo mpandeha andrasana. Herinaratra manokana azo avy amin’ny masoandro ny hampihodina izany. Tonga amin’ny toerana andehanana anatin’ny 13mn ny mpandeha”, hoy izy. Anisan’izany ny zotra maitso, hiainga eny Andohalo mihazo an’Ambanidia ary hatreny Ankatso. Tahaka izany koa ny zotra miainga etsy Ambohijatovo mihazo an’Analakely sy Soarano. Mandalo an’Antanimena sy Ankorondrano ary hatreny amin’ny Lycée Francais Ambatobe. Hampihena ny fitohanan’ny fifamoivoizana sy ny fiarovana ny tontolo iainana ny tetikasa.Tsy fotoanan’ny korontana intsony izaoNotateriny tamin’izany koa ny fihaonany tamin’ny eo anivon’ny FMI ka nahazoana ilay vola tsy averina, 332 tapitrisa dolara. “Hanarenana ny firenena, taorian’ny krizy sy hamahana ny olan’ny any Atsimo izany vola izany. Sambany eo amin’ny tantaran’ny firenena koa izany”, hoy ihany ny filoha.Etsy andaniny, nanteriny fa manohana ny ezaka ataon’i Madagasikara ny ONU, tamin’ny fihaonany amin’ny sekeretera jeneraly, i Antonio Guteress. “Tsy fotoanan’ny korontana intsony izao. Aoka hajaina ny demokrasia sy ny fifandimbiasam-pahefana…”, hoy ny filoha.Synèse R. L’article Famahana olana amin’ny vidim-piainana: ho avy ny sambo miisa 20 hitondra PPN mora a été récupéré chez Newsmada.
Oniversiten’i Fianarantsoa: hampiato ny fampianarana ny Seces
Namoaka fanambarana ny Seces sampana Fianarantsoa, ny faran’ny herinandro teo fa hampiato tanteraka ny fampianarana, manomboka anio. Tezitra ireto mpampianatra mpikaroka ireto noho ny fanaovan’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony tsinontsinona azy ireo, raha ny fanazavany.Tsy mbola voaloa hatramin’izao ny vola ho amin’ny ora fanampiny, nanomboka ny taona 2017 hatramin’ny taona 2020. Mitaky ny famerenana ny “indemnité de technicité” sy ny “rappel” ao amin’ny karaman’ny mpandraharahan’ny oniversite ihany koa izy ireo. Ankoatra izany ny fandoavana ny tambin-karama momba ny fikarohana sy fitrandrahana ho an’ireo mpikaroka efa misotro ronono. Etsy an-daniny, ny tokony hisitrahan’izy ireo ny “maintien en activité” ho an’ireo mpampianatra voakasik’izany.Nambaran’ny Seces sampana Fianarantsoa ihany koa fa tomponandraikitra feno ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika amin’izay olana hipoitra manoloana ny fanapahan-kevitra noraisina tao amin’ny Copies mahakasika ny fandraisana sy fampidirana miaraka ireo mpianatra afa-panadinana bakalorea, ny taona 2020 tamin’ity taona 2021 ity.Milaza, araka izany, ny Seces sampana Fianarantsoa fa ny tsy fandraisan’andraikitry ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika no antony mampikatso ny fampianarana, ankehitriny.Tatiana AL’article Oniversiten’i Fianarantsoa: hampiato ny fampianarana ny Seces a été récupéré chez Newsmada.
Minisitra Andrianainarivelo Hajo: « Aoka hokatsahina ny tena tombontsoam-bahoaka »
Natao, omaly tetsy Anosy, ny fanaovan-tsonia ny fanoloran’ny tetikasa Casef, fiara tsy mataho-dalana miisa telo ho an’ny Fitaleavan’ny foiben’ny fananan-tany (DGSF).« Tokony hokatsahina hatrany amin’ny fomba fiasa rehetra sy amin’ny fifanarahana famatsiam-bola tahaka izao ny tombontsoan’ny vahoaka”, hoy ny minisitry ny Fanajariana ny tany sy ny fananan-tany (MaTSF), Andrianainarivelo Hajo tamin’ny fanatrehana izany. Tafiditra amin’ny andiany faharoa izao fifanarahana fiaraha-miasa izao ary hitohy sy hiitatra amin’ny faritra 14 hafa. Hanatsarana ny tolotra omena ny vahoaka izany. “Hiompana bebe kokoa amin’ny fampitaovana ny sampandraharahan’ny fananan-tany izany tohana izany”, hoy ireo nandaha-teny. Eo ny solosaina, ny fitaovana teknolojia vaovao, fanaka anaty birao, fitaovam-pitaterana…Efa nisy sonia fifanarahana ny tetikaasa Casef sy ny DGSF ny avrily 2019. Tantsoroka ho amin’ny lamina sy fandrindrana ny fanavaozana ny sampandraharahan’ny fananan-tany, ho an’ny faritra efatra. Anisan’izany ny fanavaozana ireo lalàna mifehy ny fananan-tany, ny fametrahana antontan-kevitra ara-kajy mirindra momba ny fananan-tany. Haharitra efa-taona (2019 – 2022) izany fiaraha-miasa izany.Tsiahivina fa tetikasa hanohanana ny fanjakana amin’ny fanatanterahana ireo rindran-damina fampandrosoana eo amin’ny sehatry ny fananan-tany sy ny fambolena ary fiompiana ny Casef. Synèse R. sy FanouL’article Minisitra Andrianainarivelo Hajo: « Aoka hokatsahina ny tena tombontsoam-bahoaka » a été récupéré chez Newsmada.